ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ “Love Alarm” ရဲ့ Season2မှာ ဘယ်လိုလှည့်ကွက်တွေ ပါလာဦးမလဲ? – News Bar Myanmar
ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ “Love Alarm” ရဲ့ Season2မှာ ဘယ်လိုလှည့်ကွက်တွေ ပါလာဦးမလဲ?
News Bar October 15, 2020
မနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ “Love Alarm” ဇာတ်လမ်းတွဲက ပရိသတ်ကြားမှာ တော်တော်ကြီးရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကြိုက်တဲ့သူရှိလာရင် အချက်ပေးတတ်တဲ့ app ကနေတစ်ဆင့် သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အကြောင်း၊ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်တည်းကို ချစ်မိသွားတဲ့အခါ ပတ်သက်မှုတွေ အဆင်မပြေဖြစ်လာတဲ့အကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာပါ။
Season2မှာတော့ ဇာတ်လမ်းသဘောအရ လှည့်ကွက်တွေပါလာဦးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Season 1 မှာတုန်းက JoJo ဟာ ရွေးချယ်စရာ ကောင်လေးနှစ်ယောက်ရှိတာကို သိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ Lee Hee Young သာမက Hwang Sun Oh ကပါ သူမကို မြတ်နိုးသဘောကျနေကြောင်း သိသွားခဲ့​ပေမဲ့ သူမရဲ့ ခံစားချက်အစစ်အမှန်ကို ထုတ်ပြခဲ့ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။
အခုထွက်လာမဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာကျောင်းပြီးသွားတဲ့ JoJo က Hwang Sun Oh နဲ့ Lee Hee Young ထဲမှာ ဘယ်သူ့ကိုရွေးချယ်မလဲ? ဘယ်သူ့အပေါ်မှာ သူမရဲ့ခံစားချက်တွေ ပိုသာနေခဲ့မလဲ? သူတို့ကြားက ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေဟာ ဘယ်လိုလှည့်ကွက်တွေဖြစ်လာဦးမလဲ? ဆိုတာကတော့ Season2ထွက်လာတဲ့အခါ သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမတွဲက သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ Kim So Hyun က JoJo အဖြစ်၊ Jung Ga Ram က Lee Hee Young အဖြစ်၊ Song Kang က Hwang Sun Oh အဖြစ် အပြောင်းအလဲမရှိပဲ ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ၂၀၂၁ မှာ ထွက်လာဖို့ ရည်ရွယ်ထားပြီး ဇာတ်လမ်းထွက်လာတဲ့အခါ အားပေးရပါဦးမယ်။
ထုတ်လွှင့်ပြသနေပြီဖြစ်တဲ့ Caesar Wu နဲ့ Tang Min တို့ရဲ့ “General’s Lady” ဇာတ်လမ်းတွဲ →
Happy New Year to all the people of Myanmar who read the news every day and wish them well.
To Get Daily News
Subscribe here to read the latest news from your email daily.
New Mingalar Market, Mandalay
The site was opened on January 1, 2020 with the aim of providing part-time employment for students studying in Myanmar.
Copyright © 2020 News Bar Myanmar Co., Ltd. All rights reserved.